हिमाल देख्ने सपना झण्डै काठमाडौंमै अलपत्र
भीम भारती शुक्रबार, असार २९, २०७५ मा प्रकाशित
लु्क्लामा प्लेन ल्याण्ड गर्ने सम्भावना एकदम कमजोर भएपछि हामीले हेलिकप्टरबाट त्यहाँ सम्म पुग्ने सम्भावना तिर लाग्यौं । मनाङ एयरको Mi 17 हेलिकप्टर उतै जॉदै रहेछ । मनाङ एयरमा फेरि तौलताल गरेर वोरिङ लिई हेलिप्याडतिर आइयो । अरु ग्रुपका पनि थुप थिए । सो ठूलो हेलिकोप्टरले कार्गो पनि लिदैरहेछ । कार्गो लोड गर्दा २ घण्टा लाग्यो । त्यस हेलिकोप्टरमा पाइलट र अरु स्टाफ विचमा केही असमझदारी भइरहेको देखियो । विविध कारणले ढिलो हुँदा त्यो Mi 17 पनि लुक्लाको लागि उड्न नसक्ने भयो । आजै एयरपोर्टभित्र नै चिनजान भएका मित्र मनोज घिमिरेले यो हेलिकोप्टर उडन नसके पनि म सहयोग गर्छु, अरु साना हेलिकोप्टर लुक्ला पुग्न नसके पनि तल सुर्केसम्म जान सक्छ, भनेर मलाई आस्वासन दिए । प्लेन, हेलिकोप्टर कुर्दाकुदै भोकले लखतरान ! हेलिकोप्टर नजिकै रहेको सेनाको क्यान्टिनमा गएर अलि अलि खाजा खायौँ । दिउसो ३ बजेतिर बल्ल हेलिकोप्टरमा चढ्ने हाम्रो पालो आयो । Altitude Air को हेलिकोप्टरमा चढियो । विदेशी चालकलाई मैले सोधें लुक्ला जान सकिन्छ कि सुर्के ? सकभर लुक्ला जाने नै कोशिस् गर्ने र भएन भने सुर्केमै ल्याण्ड गर्ने जवाफ आयो ।
लामजुरा कटेपछि दुधकोशिको किनारै किनार आयो हेलिकोप्टर । किनकी माथि डॉडामा बेस्सरी कुहिरो लागिरहेको थियो । लुक्ला त झन देख्दै नदेखिने । तल सुर्केमा हेलिकोप्टर ल्याण्ड भयो । हामी उत्रियौ । हेलिबाट उत्रने वित्तिकै मैले विदेशी पाहुनाको झोला बोकेर सहयोग गर्ने भाइलाई सम्पर्क गरें, उीन लुक्लाबाट सुर्के झर्दै रहेछन् । काठमाण्डौबाट हेलि चढ्दा हामी ६ जना थियौ । पाइलट सहित ७ जना । म मेरा पाहुना २ जना र अरु यूरोपतिरका ३ जना वृद्ववृद्वा । ती ३ जना यूरोपियनहरुका गाइड लुक्लामै रहेछन् । उनीहरुसगँ उनको फोन नंम्बर रहेछ । मेरो मोवाइलबाट मैले उनीहरुको सम्पर्क गराइदिएँ । मिङमा शेर्पा उनीहरुको गाइडको नाम । मिङमा पनि लुक्लाबाट सुर्के तिरै आउँदै रहेछन् । हामी त हेलिबाट सुर्केमा झर्यौँ तर सुर्केको हेलिप्याडमा ३ सय भन्दा बढी पर्यटकहरु काठमाण्डौ जानलाई कूरिरहेका थिए । किनकी ३ दिन देखि लुक्लाको मौसमले धोका दिइरहेको थियो । भरिया भाइ सुर्के आइसकेपछि हामी ४ जनाको टोली हिँड्यो, फाक्दिङलाई गन्तव्य बनाएर । बेलुका ४ बजे सुर्केबाट हि‘डेको हाम्रो टोली मुसेमा आएर चिया पियौँ । सुर्केबाट फाक्दिङ आउँदा शुरुमै उकालो पर्छ ।
केरीलाई अलि समस्या भयो । हामी चौरिखर्क पुग्दा नै बेलुकाको सात बजिहाल्यो । अध्यारो भइसकेको थियोे । हाउ फार फाक्दिङ हाउ फार फाक्दिङ ? भन्न थालिहाले पाहुनाहरुले । कहिले कसो गाइडले पाहुनाको मनोभवना बुझेर पनि काम गर्नुपर्छ । निर्णय लिनु पर्छ । कि आज यतै बस्ने त भनेर सोधेको दुवैले एकै स्वरमा त्यस्तो गर्न पाए कति जाती हुँदो हो भन्न थाले । त्यसकारण हामी चौरीखर्कमै बस्यौँ । योजना मुताविक फाक्दिङ पुग्न नसकिए पनि यहाँसम्म आइपुग्नुलाई पनि मैले सफलता नै मानेको छु । किनकी हामी जस्तो लुक्ला आउने उद्देश्य र योजना बनाएर काठमाण्डौ एयरपोर्टमा आएका करिब ३ सय विदेशी र गाइडहरु लुक्लाको मौसम खराब भई प्लेन नउँड्दा काठमाडौमै बस्नुपरेको छ आजैपनि ।
यहाँ होटलमा पसेपछि पाहुनाहरुलाई खानपिन गराई आफूले खाएर हामी पनि सुत्यौ । यसरी झण्डै काठमाडौंमै अलपत्र हुन लागेको हामी, लुक्ला उड्न विहानै झोलीतुम्बा बोकेर निस्किएको हामी हेलिकप्टर चढेर सुर्के हुँदै धन्न आइपुगियो चौरिखर्क । यात्रा नै शुरु भएन भने हो कहीँ पनि नपुगिने । शुर भएपछि ढिलो चाँडो बेग्लै कुरा हो, यहीँबाट तन्किँदै गएको बाटोमा हामी खुट्टा लतारेर भएपनि सगरमाथा आधार शिविरतिर पुग्नेछौं । यही ठूलो कुरा मानियो ।
मौसमको गडबडीले धैरैपटक धेरै पर्यटकहरुको यात्राको तालिका गडबढ गराउँछ लुक्ला विमानस्थलले । कति रोइकराई गरिरहेका हुन्छन् अन्तराष्ट्रिय उडान छुटेकोमा । प्रकृति, मौसमले कसैको रोइकराई किन सुन्थ्यो र ?
चुनौति, प्रतिकुलता, कठिनाई नभए सगरमाथाको आर्कषण पनि किन हुँदो हो र ? गाडीमै पुग्न सकिन्छ तिब्बततिरको साइडबाट सगरमाथाको आधार शिविर । तर पनि हजारौं हजारको संख्यामा नेपाल तर्फकै रुटमा ओइरिन्छन् वर्षेनि विदेशी पर्यटकहरु, किनपनि भने, चुनौतीसँगको सामना गर्दै गरिने यात्राको एड्भेन्चरमा जुन मजा छ एसीवाला गाडीको सिटमा खुट्टा दोव्र्याएर पुगिने वेसक्याम्पको यात्रामा त्यो मज्जा कहाँ पाउनु ?
भीम भारतीबाट थप
अब्बल सामुदायिक विद्यालयकाे यात्रा: नारायणी नमुना मा. वि.काे सफलताको कथा सोमबार, भदौ २५, २०७५
सगरमाथा आधार शिविर र चोलापास डायरी -४ शुक्रबार, असार २२, २०७५
सगरमाथा आधार शिविर र चोलापास डायरी -३ शुक्रबार, असार १५, २०७५